Barnoota - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 10:47 26 Adooleessa 202110:47 26 Adooleessa 2021
...tti maxxanfame 12:19 22 Adooleessa 202112:19 22 Adooleessa 2021
'Sababiin Albinoon qabameef manneen barnootaa shan na galmeessuu didan'
Wiinii Jeelimoo barattuun umurii waggaa 15 fi kan dhibee gogaa nama geedaru Albiinoo jedhamuun qabamtedha. Isheenis sababii bifa gogaa qaama isheetiif jecha manneen barnootaa shan galmeessuu akka didan BBC'tti himte.
...tti maxxanfame 11:43 11 Adooleessa 202111:43 11 Adooleessa 2021
'Kanan gaafadhe gaaffii mirgaa waan ta'eef gaabbii omaatuu hinqabu'
Guraandhala darbe keessa sagantaa eebba barattoota Yunivarsiitii Jimmaarratti kan qabame Dargaggoo Mohaammad Deeksiisoo ''waanan yeroo sana gaafadhe gaaffii mirgaa waan tureef gaabbiin natti dhagahamu gonkumaa hinjiru'' jechuun BBCtti hime.
...tti maxxanfame 6:43 9 Adooleessa 20216:43 9 Adooleessa 2021
Shamarreen dorgommii jechoota qubeessuu mo’achuun seenaa haaraa hojjette
Zaila Avant-garde shamarree kutaa bulchiinsa New Orleans, Louisiana irraa kan dhufte yoo tahu, jecha Afaan Ingiliizii "murraya" jedhu qubeessuutu injifannoo ishee mirkaneesseef.
...tti maxxanfame 4:06 9 Waxabajjii 20214:06 9 Waxabajjii 2021
'Deebii gaaffii barootaa' kan ta'e Yunivarsitiin Booranaa, barattoota simatee barsiisuuf
Hawwii barnootaafi hojii qorannoo naannoo argachuuf fedhuurraan kan ka'een gaaffii waggoota hedduun booda kan milkaa'e Yunivarsiitiin Booranaa amma barattoota simatee barsiisuuf qophii ta’uu Pireezidaantiin Yunivarsiitichaa BBCtti himan
...tti maxxanfame 8:04 28 Caamsaa 20218:04 28 Caamsaa 2021
Tigraayitti manneen barnootaa 'loltootaan qabamuufi saamamuun mirga barachuu ijoollee danqe'
Naannoo Tigraayiitti lolaan maddiitti manneen barnootaa loltootaan akka lafa qubannaatti fayyamuufi saamichi raawwatamee barattoonni barumsarraa akka fagaatan taasiseera jedha Dhaabbanni Humaan Raayiris Wochi.
...tti maxxanfame 11:48 22 Caamsaa 202111:48 22 Caamsaa 2021
Barattoonni rammaddii yuunvarsiitiin komii kaasan irra deebiin ramadamuuf
Bara 2012 qormaata seensa yuunvarsiitii fudhachuun yuunvarsiitii ramadaman irratti barattootni komii kaasan irra deebiin ramaddii isaanii Wiixata dhufu Waxabajji 24,2021 irraa eegaluun karaa interneetii ilaallchuu akka jalqaban himame.
...tti maxxanfame 5:12 12 Caamsaa 20215:12 12 Caamsaa 2021
Yunivarsiitii Ambootti waggoota shan darbaniif Pireezidantii Yunivarsiitichaa ta'uun tajaajilaa kan turan Dr. Taaddasaa Qana'aa torbee darbe keessa aangoorraa kaafamuun isaanii dhagahaameera.
...tti maxxanfame 4:19 12 Caamsaa 20214:19 12 Caamsaa 2021
Obbo Ahimad Hasan Sukkaare jedhamu. Maanguddoo ganna 64 yoo ta'an, hanga kutaa 8tti qofa baratan. Maanguddoon kuni dandeettii kalaqaa umamaan qabaniin mirga abbummaa kalaqa afur Ministeera Saayinisii fi Teeknolojiitti waajjira mirga abbummaa kalaqaa Itoophiyaarraa beekamtii argataniiru.
...tti maxxanfame 7:14 7 Caamsaa 20217:14 7 Caamsaa 2021
Daa'imni ganna 12 dhukaasa mana barnootaa keessatti bantee sadii madeessite
Barattuun ganna 11 ykn 12 taati jedhamte tokko US isteeta Idaahotti mana barnootaa keessatti dhukaasa banteen barattoota lamaafi hojettuu mana barnootichaa tokko rasaasaan dhooftee madeessuu Poolisiin beeksise.